China Lab-use Fluidized-bed Jet Mill For 1-10kg Capacity factory sy mpanamboatra | Qiangdi
Jet Mill ampiasaina ao amin'ny Lab, izay ny fotokevitra dia mifototra amin'ny fitsipiky ny fandriana fluidized Jet Mill dia fitaovana toy ny fampiasana ny onjam-peo haingam-pandeha hanatanterahana ilay karazana maintso mahery vaika. Ny voam-bary dia haingam-pandeha amin'ny fikorianan'ny rivotra haingam-pandeha.
Fanoritsoritana sary ho an'ny milina lehibe
Ireo fitaovana dia hofongorina amin'ny alàlan'ny fanafainganana ny fiatraikany ary fifandonana imbetsaka eo afovoan'ny fikorianan'ny rivotra haingam-pandeha. Ny fitaovana vita amin'ny pulver dia nosarahan'ny kodiarana fitetezana ary ny sombintsombiny takiana dia nosarahina avy eo ny Cyclone Separator and Collector, ireo fitaovana matevina dia alefa any amin'ny efitranon'ny fikosoham-bary mba hikarakarany bebe kokoa mandra-pahatongany any amin'ny habe takiana.
1.Mainly ho an'ny fangatahana ambany fahaiza, 0. 5-10kg / h, mety ampiasaina amin'ny Lab.
2.Ny singa dia noforonina ho toy ny rafitra anatiny mifototra hanatanterahana fikosoham-bidy mihidy.
3.Tsy misy fiakaran'ny maripana, tabataba ambany, tsy misy fahalotoana, fako ambany mandritra ny fikosoham-bary.
4.Salamina kely, endrika matevina, mety ampiasaina amin'ny Lab. Ny rafitra dia mampiasa fanaraha-maso efijery manan-tsaina, fandidiana mora ary fanaraha-maso marina.
5. Miaraka amin'ny porofon-drivotra tsara, miantoka ny tontolo iainana madio. Fandidiana sy fikolokoloana mora, fiasan'ny fitaovana mandeha ho azy.
6. Sakany marobe:ny fahamaotiana mamotika ny fitaovana dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny hafainganan'ny fihodinan'ny kodiarana sy ny rafitra. Amin'ny ankapobeny dia mety hahatratra d = 2 ～ 15μm
7. Fanjifana angovo ambany:Izy io dia afaka mamonjy angovo 30% ～ 40% raha ampitahaina amin'ny pulverizers pneumatic rivotra hafa.
8. Akanjo ambany: Satria ny fiatraikany sy ny fifandonan'ireo poti-javatra dia vokatry ny fikapohana sy ny fifandonana, ka zara raha mahatratra ny rindrina ireo sombina haingam-pandeha. Azo ampiharina amin'ny famotehana ilay fitaovana ambanin'ny Moh's Scale 9.
Famolavolana antsipirian'ny milina
1. Tsotra ny firafitra, misy lavaka fanasana, mora diovina
2. Motor misy satroka mba hisorohana ny fidiran'ny vovo
3. Firafitra mifangaro: kely ny fibodoana ny tany
1. Mifanaraka tanteraka amin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001-2000;
2. Fanaraha-maso henjana manomboka amin'ny fividianana fanaraha-maso, fizahana fizahana ka hatramin'ny fanandramana farany;
3. Nanangana sampana QC maro hanatanterahana fitsipika mifehy ny fifehezana kalitao;
4. Ohatra amin'ny fanaraha-maso kalitao amin'ny antsipiriany:
(1) Fikirakirana feno ho an'ny fifehezana kalitao sy fanamarihana kalitao;
(2) Fanaraha-maso henjana ho an'ireo singa ao amin'ny fikosohanay fikosoham-bary, hanomezana toky ireo vokatra tsy misy fahasimbana ary hialana
mihinana harafesina ary mandoko ny peeling rehefa avy eo.
(3) Ireo singa mahay ihany no hangonina ary ny fitaovana feno dia tsy maintsy hojerena tanteraka alohan'ny hamarotana.
Aorian'ny fanamafisana ny varotra dia hatolotray ireto serivisy teknika manaraka ireto:
1. Volavola ho an'ny fivezivezin'ny tsipika famokarana sy ny famolavolana fitaovana, maimaimpoana;
2. Omeo ny sarin'ny fototra anaovan'ny mpanjifa fikosoham-bary ary ny sarina faritra mifandraika, sns;
3. Ny masontsivana ara-teknikan'ny fitaovana peripheral dia homena;
4. Soso-kevitra ara-teknika maimaimpoana amin'ny fanitsiana ny firafitra sy ny fampiharana ny fitaovana;
5. Fanatsarana ny fitaovana (mila mandoa ny vidiny ny mpanjifa);
1. Halefanay any amin'ny tranonkala ny teknisiana anay mba hitarika ny fametrahana fitaovana sy ny asa vaventy.
2. Mandritra ny fametrahana sy ny fanirahana azy dia manome serivisy fanofanana ho an'ny mpandraharaha izahay.
3. Ny daty manome antoka ny kalitao dia herintaona aorian'ny komisiona. Ary aorian'izany, hanangona ny vidiny izahay raha manome fanamboarana ny fitaovanao.
4. Fikojakojana ny tsy fahombiazan'ny fitaovana vokatry ny fikirakirana tsy mety (hangonina ny sandany sahaza).
5. Manolotra ireo singa izahay miaraka amin'ny vidiny mirary sy ny fikojakojana azo simbaina.
6. Raha ilaina ny fanamboarana fitaovana aorian'ny lany daty momba ny kalitao dia hanangona ny vidin'ny fikolokoloana izahay.
Teo aloha: Fampiasana jet-type Disc-type mill mill QDB-50 QDB-100 QDB-150
Manaraka: Indostrian'ny bateria sy fitaovana simika hafa ampiasaina amin'ny mill-bed am-pandriana
Nitrogen Protection Jet Mill System Ho an'ny ...